सामसुले Huawei ले गइरहेको GG संकटको फाइदा लिनेछ Androidsis
सामसुले Huawei ले गइरहेको GG संकटको फाइदा लिनेछ
कोरियाली राक्षस विभिन्न तरीकाले समग्र नाफा बढाउन नयाँ तरिकाहरूमा काम गर्दैछ। विकासोन्मुख देशहरूमा मध्य-दायरा र कम-अन्त उपकरणहरूको बृद्धि गर्दै, अहिले Samsung नेटवर्क उपकरणहरू प्रदान गर्नमा रुचि राख्दछन्.
सामसुले अर्को प्रणालीको परीक्षणको लागि नेटवर्क प्रणाली प्रदान गर्न काम गरिरहेको छ 5G टेक्नोलोजी विभिन्न देशहरूमा। फर्म Huawei प्रतिस्थापन गर्दै छ, जुन द्वारा चिनियाँ सरकारको नजिकको आरोपको कारण अर्डर प्राप्त गर्न समस्या आयो संयुक्त राज्य अमेरिका, र आवश्यक पार्टीहरूलाई नेटवर्क उपकरणहरू आपूर्ति गर्न तयार छ।
सामसु Electronics इलेक्ट्रोनिक्सले टेलिकम्युनिकेशन्स उपकरण व्यवसायमा आफ्नो स्थिति सुदृढीकरण गर्न काम गरिरहेको छ। धेरै सम्भावित ग्राहकहरूले G जी नेटवर्कहरू निर्माण गर्न सामसु'sको प्रयासहरूको नोटिस गरिरहेका छन्। कोरियाली राक्षस बिरूद्ध सुरक्षा डर मा ठूलो बनाउन बोली मा छ "अहिलेको संदिग्ध हुवावे".
सामसुले G जी उपकरणहरूको मागको बिचको दुरी मेटाउन प्रयास गर्दैछ। तपाईं बिभिन्न कर्मचारी र प्रबन्धकहरूलाई उनीहरूको सब भन्दा शक्तिशाली नेटवर्क विभाजन निर्माणमा मद्दत गर्न पुनर्गठित गर्दै हुनुहुन्छ। कम्पनी एरिक्सन, माथि उल्लिखित Huawei र नोकिया जस्ता ठूला खेलाडीहरू विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्न काम गरिरहेको छ।
रोयटर्ससँग कुरा गर्दै कम्पनीका एक प्रतिनिधिले भने कि धेरै उद्योग विशेषज्ञ र सम्भावित ग्राहकहरू छन् कम्पनीले G जी नेटवर्कको विकासमा लगानी गरिरहेको गतिबाट प्रभावित। फ्रान्सेली एयरलाइन्ज ओरेन्जको सीटीओ मारी-नोले जोगो-लाभिसियरले विकासको अवलोकन गर्न उक्त सुविधाको भ्रमण गर्यो र प्रगति देखेर धेरै खुसी र छक्क परे।
विगतमा, ओरेन्जले Huawei सँग २ markets बजारमा आफ्नो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पार्टनरको रूपमा नेटवर्क उपकरण प्रदान गर्न काम गरिसकेको छ। अब, सुन्तलाले सामसु withको साथ परीक्षणको लागि सँगै आएका छन् 5G टेक्नोलोजी बिभिन्न स्थानहरुमा.
अघिल्लो महिना, दक्षिण कोरियाली प्रधानमन्त्री ली नाक-युनले सामसु'sको नेटवर्कि division डिभिजनको भ्रमण गरे। सामसु officialsका अधिकारीहरूले उच्च स्तरीय ईन्जिनियरहरू भर्ती गर्न कोरियाली राक्षससँग समन्वय गर्न मन्त्रीलाई सोधेका छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ। "हामीलाई थप सफ्टवेयर ईन्जिनियरहरू चाहिन्छ र हामी त्यो प्रतिभा पाउन सरकारसँगै काम गर्न चाहन्छौं," उनीहरूले लीलाई भने।
यो एक छ राम्रो समाचार देशहरू जुन पछि 5G नेटवर्कहरू परीक्षणको विकल्प खोज्दै थिए Huawei मा अमेरिकी आरोप। यसले उनीहरूलाई सामसु ofको सहयोग बिना कुनै प्रतिबन्ध बिना without जी नेटवर्क परीक्षण गर्न अनुमति दिनेछ। यद्यपि कम्पनीले अझै कुनै आंकडाको विस्तृत वर्णन गरेको छैन जसले हामीलाई व्यापारको घाटा र वृद्धि अनुमान गर्न अनुमति दिन्छ, तर सामसु5आगामी years बर्षमा G जी मोबाइल प्रविधिलाई मजबुत बनाउन २२ अर्ब डलर लगानी गर्न इच्छुक छ। "हामी Huawei सुरक्षा चेतावनी को विषय हो जब एक समयमा उठ्ने बजार अवसरहरूको फाइदा लिन हाम्रो नेटवर्क व्यवसाय मजबूत गरिरहेका छौं," सामसु sources स्रोत मध्ये एकले भने।
भारतको मुख्यतया बोल्दै, सामसु sources स्रोतहरूले दावी गरे कि उनीहरू आफ्नो नेटवर्कलाई G जीमा अपग्रेड गर्न भारतको सबैभन्दा ठूलो G जी टेलिकम अपरेटर रिलायंस जिओसँग वार्ता गरिरहेका छन। सामसु officialका अधिकारीले दावी गरे कि भारतमा G जी टेक्नोलोजी टाढा छैन। थप रूपमा, संयुक्त राज्यमा, सामसुसँग पहिले नै नेटवर्क उपकरणहरू आपूर्ति गर्नको लागि यसको अलमारीमा भेरिजन संचार, एटी एंड टी इंक, र स्प्रिन्ट कर्प रहेको छ।
सामान्य मा, यदि यसले आउने बर्षहरूमा सही चाल ल्यायो भने सामसुले धेरै फाइदा लिनेछ। सामसु'sको नेटवर्क व्यवसायले यस कम्पनीलाई गत बर्ष लगभग 870 billion० बिलियन वान ($$775 मिलियन डलर) बनाइसकेको छ। गत वर्ष नोकिया र एरिक्सनले क्रमशः १.1.4 अर्ब र २.१ अरब डलर कमाएको छ।
हुवावे संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाईएको आरोप को विरुद्ध लडिरहेको छ यसले चिनियाँ एजेन्सीहरूलाई अमेरिकामा जासुसी गर्न अनुमति दिन सक्छ, जसले आफ्नो सहयोगीहरूलाई अर्को पुस्ता G जी टेक्नोलोजीहरूको परीक्षणको लागि हुवावीको उपकरण प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। जवाफमा, न्यूजील्याण्ड, अष्ट्रेलिया, अल्बानिया र केही अन्य देशहरू कुराकानी गर्न थाल्छन् र ईन्जुनेन्डो को कारण Huawei संग पज। हुवावेका लागि त्यहाँ केही राम्रो समाचार पनि छ: देशहरू मन पराउँछन् थाईल्याण्ड, क्यानडा र भारत Huawei संग 5G नेटवर्क को परीक्षण मा सहयोग गर्दै छन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » हाम्रो बारेमा » सामसुले Huawei ले गइरहेको GG संकटको फाइदा लिनेछ
LG V50 ThinQ 5G को रेंडरले यसको सबै उपस्थिति प्रकट गर्दछ: सम्भावित सुरुवात मिति पनि प्रकट भयो
शाओमीले पप-अप क्यामेराको साथ स्मार्टफोन सुरूवात गर्न सक्दछ